Umabonwakude waseKazakhstan: IJamani ngurhulumente olwaphulo-mthetho kwaye ukhohlakele, uqhutywa ngabaphangi kunye nababulali.
Umlweli wamalungelo oluntu kunye nesazi sezibalo uNikolai Erney, uthetha ngendlela iJamani eyaphula ngayo iSivumelwano samaLungelo oMntwana, iNgqungquthela yamaLungelo oLuntu, iSivumelwano saseLisbon esisekela i-European Union, indlela iKhomishini yaseYurophu eyiphethe ngayo ngokungekho mthethweni, malunga nenkohliso kubunkokheli bukaRhulumente waseJamani, urhwaphilizo kubunkokheli bendlu yabameli. EJamani, ishishini lokulunyulwa, ugqirha wengqondo owohlwayayo, iijaji zobuxoki ngaphandle kwesifungo, izigwebo ezingatyikitywanga, ukubethwa kwabantwana ezikolweni, ukuhlaselwa kweembacu kubantwana baseJamani, ukukrwitshwa kwabantwana esikolweni
Molo, ndinguLilia Iglikova. Siyaqhubeka nokuxoxa ngomthetho oyilwayo wokulwa ubundlobongela basekhaya kwiintsapho. Sinxibelelana no-Skype ovela eMoscow, itshantliziyo lezoluntu, itshantliziyo lamalungelo oluntu-uNikolai Erney. UNikolay, molweni.
Iminqweno ejikeleze umthetho oyilwayo wokulwa ubundlobongela basekhaya kwiintsapho ifikelele kwinqanaba laseKazakhstan xa kunokwenzeka ukuba kuthathwe isigqibo malunga nokuba yeyiphi na imigaqo-nkqubo yokukhusela iintsapho kunye nabantwana ekufuneka yakhiwe. Ukuthanda ukusebenzisa iimodeli zaseNtshona kwezomthetho, ngokokwazi kwam, kuya kusanda kwilizwe lethu, ke ndingathanda ukubona ukuba izinto zihamba njani na apha eNtshona.
Siyazi ukuba uhlala eJamani iminyaka eliqela kwaye ukhe wahlangabezana nale ngxaki, ke ndingathanda ukuva uluvo lwakho ngale meko.
Ngapha koko, ngoku iRussia neKazakhstan zikopa imodeli yaseNtshona yokulwa ubundlobongela basekhaya, oko kukuthi, bathatha imithetho, phantse omnye komnye, komthetho obizwa ngokuba ngumthetho wezobulungisa bolutsha, oko kukuthi, le iseti yemithetho, iseti yemithetho ekucingelwa ukuba ikhusela abantwana kwaye kuthiwa ukukhusela amalungelo abantwana, kwaye babamkele, bayawuguqula ngokulula lo mthetho kwaye bamkele umntu ngamnye.
Kwaye kukhokelela phi oku? Ibukeka njani eJamani, ukuba isebenza njani eJamani. Umntwana, umzekelo, umntwana uyazalwa, ukuba usapho aluzithandi iinkonzo zentlalo-ntle ngesizathu esithile, unokulandwa esibhedlele. Oko kukuthi, ngokoqobo apho emva kokuzalwa.
Ngokukhawuleza emva kokuzalwa, oko kukuthi, akukho ngosuku, ezimbini, kungekhona kwiintsuku ezintlanu. Abantwana abasuka kwiintsapho ezibhalisiweyo basiwa ngqo esibhedlele. Usapho lunokubhaliswa ukuba belunalo ngaphambili .. Ukuba, umzekelo, intombazana ikhulele kwikhaya leenkedama, okanye umfana ukhulele kwikhaya leenkedama, olo sapho sele lubhalisiwe, sele zithathwa njengezingathembekanga kwaye azisebenzi. Zingasuswa kubo.
Ishishini, xa ujonga ukuba isebenza njani, uyaqonda ukuba lishishini elinenzuzo kakhulu kumagosa athile. Kungenxa yokuba, umzekelo, usapho oluqhelekileyo ..
Ukuze umntwana asuswe kusapho, kusafuneka ukuba kubekho umqondiso kubulungisa bolutsha, njengoko ndiyiqonda?
Hayi, umqondiso awunyanzelekanga ukuba uvele kusapho. Umqondiso unokuvela enkulisa, umqondiso unokuvela kubamelwane ukuba umntwana unyathele iinyawo zakhe phantsi, uhamba nje phantsi, abamelwane abayithandi, banokukhalaza kwaye usapho lufike kwipensile. Ngokuhambelana, itsheki inyuliwe, amagosa abagcini beza eflethini kwaye aqala ukuqinisekisa abazali ukuba yonke into ilungile, ngalo mzuzu barekhoda ngononophelo yonke into abangayithandiyo.
Oko kukuthi, umzekelo, umama uncancisa umntwana. Abasebenzi abanyamekelayo basenokungayithandi le nto. Kufuneka ukondle ngebhotile. Umama unxibelelana kakhulu nomntwana. Umntwana, umzekelo umntwana omncinci, ulala ecaleni kukanina, ayamkelekanga le nto. Ngoku ngobhubhane we-coronavirus, imfuneko kukuba ukuba umntwana uvela enkulisa okanye esikolweni, okanye ukuvalelwa yedwa kwaziswa enkulisa okanye esikolweni, umntwana kufuneka ahlale yedwa iiveki ezimbini zitshixiwe egumbini, akavumelekanga ukuba anxibelelane nabazali bakhe.
Uyabona, inoxinzelelo lomntwana, ukuba yedwa egumbini, akukho namnye onokudlala ngaye, uzivalele nje. Zonke ezi zinto zintsha, kwilizwe lethu, zikhokelela kwimeko kunye nabantwana, iya isiba mandundu. Umzekelo, kwezi nyanga zimbini zidlulileyo, amaJamani ebeqhaqhazelisa amazinyo abantwana ezikolweni. Oko kukuthi, baneeklasi eziqala ukuphela kuka-Agasti, imihla eyahlukeneyo yemimandla, cinga ngoSeptemba-Okthobha babeneefestile ezivuliweyo, iingcango zivulekile, abantwana bahlala kuyilo, Oko kukuthi, zonke iiklasi ziyilo, kwaye ngokufanelekileyo, beza nje ikhaya lifriziwe, abanakubamba ipeni, akukho nto. Ngokwendalo, babenobhubhane wesifo somkhuhlane, ubhubhane we-SARS, ubhubhane we-otitis media, ukudumba kwendlebe ephakathi, kodwa oku kuthathwa njengesiqhelo kumaJamani, kuba ngale ndlela baqeqesha abantwana ngobuninzi, kufana nenkolo, oko kukuthi, abantwana kufuneka babe ngumkhenkce ukuze bafumane uqeqesho ... Ngenxa yoko, ngokoqobo, ukuba uhamba esitratweni, qho emva kweemitha ezingama-50 ubona indawo yokusebenzela ethengisa izinto ezifakwayo ezindlebeni kwaye ubandakanyeka ekukhetheni izinto zokufakelwa ezindlebeni. Oko kukuthi, xa uyijonga yonke le nto, umbuzo uvela, ngaba abantu ngokubanzi banele? Wena ngokwakho usongelwe ngokupheleleyo, kwaye umntwana wakho uvule imilenze nentloko ekhwele ezantsi esitratweni.
Njani, ukuba umntwana uyala ukuya esikolweni kwiimeko ezinjalo, uyagula nje okanye enye into, ngokufanelekileyo, abazali balinde isohlwayo esibi. Intlawulo ye-1000 euro ngokungabonakali esikolweni. I-1000 yeerandi ngosuku. Ukuba umntwana akahambi qho esikolweni, oko kukuthi, iveki okanye nangaphezulu, usapho luyabhaliswa ngokuzenzekelayo kwabasemagunyeni abagcinayo kwaye umntwana angathathwa nje esikolweni, ngaphambi, ukuba bekukho, ukuba bekukho nakuphi na ukungavisisani enkulisa, banokuthathwa ngqo kwisikolo sabantwana abancinci. Kwaye uyathathwa, wabekwa kwangoko kusapho olukhulisa abantwana. Ukusukela mzuzu wokubanjwa, amaJamani awanamda, abanyanzelekanga ukuba bathathe isigqibo zingaphelanga iiyure ezingama-24, njengeRussia, bafuna ukwamkela umthetho ngaphakathi kweeyure ezingama-24 ukuze inkundla ithathe isigqibo, okanye iKazakhstan ifuna ukwamkela umthetho kungaphelanga iiyure ezingama-24 ukuba inkundla ithathe isigqibo. Hayi, akukho magama anjalo kamva.
Emva koko uya kuba nexesha elinye kuphela, kodwa ukuba uwamkela lo mthetho nangayiphi na indlela abantwana banokuthathwa ngesigqibo sabasemagunyeni kwezolawulo, uya kuba nekota enye kuphela-iminyaka eli-18. Nokuba yi-18, kodwa i-23 iminyaka ubudala. Oko kukuthi, ukugcinwa kugcinwa ngaphezulu komntwana onjalo de abe neminyaka engama-23, kwaye eneminyaka engama-23, ukuba usafumanisa ukuba ngubani umama notata wakhe, angabuyela ekhaya okanye ababone. Kodwa akazukufuna ukubabona, kule minyaka izayo uyakuyichazelwa ngokuxhaphakileyo ukuba umama notata bayagula, umama notata bayingozi, ngoku unabazali abatsha, uza kufakwa kakuhle iziyobisi, iipilisi, baya kumcacisela, yonke into eyenzekayo Yonke into ilungile, oko kukuthi, uya kuba nolungelelwaniso olukhulu lokuqonda aze athiye utata-mama. Kukho imizekelo yabantwana ngenene, kukho unyango olunzulu oluqhubekayo. Kubonakala njani kumaJamani, apha umntwana uthathiwe, umama notata bothukile, umntwana akaveli esikolweni okanye enkulisa, okanye batsalela umnxeba enkulisa ukuba bayithathile.
Babalekela kwigqwetha. EJamani, awunakufaka isimangalo ngaphandle kwegqwetha, apha ngamatyala amancinci kuphela anokusonjululwa ngaphandle kwegqwetha. Kwaye iimeko ezinjalo zihlala zinegqwetha. Ngokukhawuleza, iithegi zamaxabiso ziqala ukusuka kumawaka angama-20 euros, amawaka angama-50 eeuros, kwaye iinkampani zeinshurensi azithathi loo mabango. Oko kukuthi, abazali baqala ukuhlawula igqwetha, kwaye igqwetha laseJamani lisenkundleni. Igqwetha laseJamani lihlala liyinxalenye yenkundla. Ufana nesandla sasekunene sejaji. Ngokomthetho uthatha isifungo esifanayo nomgwebi. Igqwetha likwanalo negqwetha laseJamani kuphela ukuba likumbutho wamagqwetha. Oko kukuthi, ukuba umntu ulunge kakhulu ngokokuziphatha, uyayazi kakuhle imithetho, kodwa ngasizathu sithile waxabana neejaji, wakhusela amalungelo abathengi, emva koko, xa ebiza ijaji, wagxothwa ngaphandle koogxa bakhe, wagxothwa kumbutho wabameli bakhe, emva koko umntu, ubume bakhe bezomthetho bujika bube lithanga, uyayeka ukuba ligqwetha.
Akanakwenza enye into. Nokuba angaba ligqwetha kwikholeji yelinye ilizwe, abe ligqwetha lekholeji yelinye ilizwe, naye kwinkundla yaseJamani ngekhe akwazi ukubhala iphepha elinye, angenise amaxwebhu naphina. Yintoni umphumo wokugqibela? Abantu babalekela kumagqwetha, bahlawule imali, igqwetha lithi ewe yonke into izakulunga, ngoku sizakufaka isimangalo enkundleni, uzakufaka isimangalo kwinkundla, kwaye inkundla izakubeka ityala kwinyanga ezintandathu. Okanye ucwangcisa intlanganiso kwiinyanga ezi-3. Umntwana uqhubekiswa iinyanga ezintathu. Uyaqonda? Apha kolu sapho lokondla. Ulwabiwo losapho olukhulisa abantwana kwangoko luqala kwangoko, urhulumente wabela imali kwingingqi yesithandathu ukuya kwisibhozo samawaka eeros ngenyanga. Cinga i-8 lamawaka eeros ngenyanga yi-100 lamawaka euros ngonyaka. Ezi invoyisi zithunyelwa kubazali. Oko kukuthi, kuqala urhulumente ahlawule le mali kusapho olukhulisa abantwana, emva koko athumele la matyala kubazali kwaye atshabalalise usapho ngokungathi zizinto eziphathekayo. Kuba usapho kufuneka lubhatale igqwetha, usapho luphantsi koxinzelelo, usapho alusakwazi ukusebenza.
Kwakukho iimeko apho abantwana abasixhenxe basuswa kusapho olunye oluhle, bekukho ibali malunga noku. Isizathu sokuba abantwana babanjwe kukuba abantwana babenxibe iimpahla ezingezobudala babo ekhaya, kwaye umama wayediniwe kangangokuba kwenye indawo ekoneni abantwana bayachama kwaye abasemagunyeni bababona.
Umbuzo uvela, uxolo ku-7 yabantwana i-8 lamawaka ee-euro, eli li-50-60 lamawaka eeros ngenyanga, phantse amawaka asixhenxe amawaka euros ngonyaka, Oko kukuthi, ezo ntsapho, zinabantwana abalungileyo, abantwana abasempilweni, ngokungathi kunjalo, ngokuziphatha okuhle- ezi ntsapho ziba mnandi iqhekeza, ngokwenene bazingelwa kakhulu. Kwaye ezi ikakhulu ziintsapho zabaphambukeli. Ngenxa yokuba abaphambukeli, aba ngamaKazakhs afudukayo njengamaJamani aseKazakh, ezo ntsapho. AmaJamani aseRussia afudukayo. Bonke abantu bamanye amazwe abaze emsebenzini kuba abanalo unxibelelwano phakathi kwabatshutshisi kunye neejaji ezinokubanceda kule nto, ekusombululeni lo mbandela.
Umthetho wefowuni eJamani usebenza kakuhle.
Kulungile, uNikolai, kwaye uthi le yinto encinci, ndiyabona kule meko ukuba yintoni inzuzo yegqwetha, iijaji, abatshutshisi. Ukusuka kwibali lakho, ndiyaqonda ukuba luyintoni uncedo kwiintsapho ezamkelekileyo, kodwa andiqondi ukuba kutheni urhulumente eyidinga?
Kwaye urhulumente, uyaqonda, iJamani yinkampani enkulu enkulu, oko kukuthi, ukuba sijonga eJamani, sicinga ukuba iJamani ngurhulumente wentando yesininzi, apho kukho unyulo, kukho amaqela ali-12, abantu banyula umntu, emva koko la maqela bakhetha i-chancellor, bakhetha umongameli, enye into ... Ukuba sithetha ngale nto, ukuba uhlala apho, uya kuhlala ngokwasemzimbeni apho, kwaye ujongane neengxaki, okanye ubone indlela abanye abantu abadibene ngayo nengxaki, uya kuyiqonda eyona nto iJamani Le yenye yeenkampani ezinamatyala, yile LLC, inene.
Eli liqumrhu, ngumbutho omnye. Zonke ezinye iifemu zingamasebe nje eli qumrhu. Kwaye ke kufana nemeko yamagosa. Konke okwenziwayo kwenziwa ngamagosa ukukholisa amagosa. Xa ngokuqinisekileyo ingenaluncedo kurhulumente njengoluntu, yintlekele kurhulumente. Kodwa kuluncedo kakhulu kumagosa, kuba afumana ii-odolo eziqinisekisiweyo zomsebenzi wabo, abagcini ngokwabo, ngakumbi nangakumbi umsebenzi, babamba abantwana ngakumbi nangakumbi minyaka le.
Oko kukuthi, ukuba kwiminyaka eli-10 eyadlulayo babethathe amawaka angama-50 abantwana ngonyaka, ngoku bathimba abantwana abangamawaka alikhulu ngonyaka. Ngokusengqiqweni, emva kokuba kuthinjwe amawaka angama-50 okuqala, kunyaka olandelayo kufanele ukuba bathimbe iwaka okanye amabini. Kuba bonke abantwana abavela kwiintsapho ezinobungozi bathathiwe. Hayi, bathatha nangaphezulu kunyaka olandelayo, emva koko nangaphezulu, nangaphezulu. Oko kukuthi, amagosa azibonelela ngokwabo ngomsebenzi. Apha oogqirha bezengqondo babonelela ngokwabo ngomsebenzi, iijaji zibonelela ngomsebenzi. Kwaye kwangaxeshanye, ngoosopolitiki, bakhuthaza ukonyuka okuphezulu kunye nokunyuka kwenkcitho kuhlahlo-lwabiwo mali.
Kwaye abezopolitiko bayayongamela oku, kwaye kwinqanaba lobunkokheli beJamani State Duma kunye neBundestag. Ukuba sijonga usekela sihlalo Michaela Noll - Michaela Marion Noll (née Tadjadod), le yiBundestag, inkokheli yaseJamani, usekela. Usihlalo weBundestag, oko kukuthi, iifoto ezininzi apho adibana khona noWolfgang Schwachula -Wolfgang Schwachula, uWolfgang Schwachula uyintloko ye-Jikelele yoMbutho waBantwana woKhuseleko kubazali abagula ngengqondo Oko kukuthi, uyazi, olu lwakhiwo lufana nomthi onje. Kwaye uye phezulu. Ngokuhambelana, uSchwachula ubonelela ngezisombululo eziyimfuneko kubazali, abasayine ukuba bagula ngengqondo, bayingozi. Iijaji ziyamnikezela kwaba bathengi kwangoko, babhalele umntu lowo eSchwachula. Kwaye uSchwachula udibana noMichaela Marion Noll, usekela-sihlalo weJamani Duma State, unoxanduva lokwabiwa kwemali. Yonke le nkqubo isebenza ngoluhlobo.
Kwaye ukuba ufikile apho ubuncinci, ubuncinci ubethe ipensile, emva koko abasemagunyeni baseJamani bakugcina ilungelo lokumisela apho uya kuhlala khona nomntwana wakho. Kwaye awunakulishiya ilizwe. Kukho iimeko ezinjalo, zinkulu. Abantu baseMelika babhale izikhalazo kwi-US Congress, basindise abantwana baseMelika kumaJamani.
Umabonwakude waseMelika, amajelo amaMelika aseMelika, afota ividiyo, efotwa kwiminyaka eli-10 eyadlulayo, le vidiyo isasebenza, malunga nendlela elisebenza ngayo ishishini labantwana. Bawakhetha njani, asebenza njani la makhaya okugcina abantwana, indlela ezibhengezwa ngayo kumaphepha-ndaba “sifuna umntu ononxibelelwano oluhle kwabasemagunyeni,” Oko kukuthi, abanazintloni, oko kukuthi, izibhengezo, kwaye le yinkqubo yonke yeJugendamt, yiofisi yemicimbi yolutsha.
Olu luqeqesho lwaseJamani. Yonke yadalwa ngexesha likaHitler, kwaye ibisebenza ngendlela efanayo ukusukela ngoko. Yenzelwe ngokukodwa abantu abancinci, ngakumbi abantwana abakwibanga lokuqala, ewe, nakwisikolo sabantwana abancinci, iqala, ngakumbi ibanga lokuqala, lesi-2, ibanga lesi-3, ukuya kubuchopho. Ukuba abantwana bavela kwibanga lesi-2 bathi mama katata, mama uyathanda ukuba phezulu okanye ezantsi kutata okanye ngasemva, umama wothukile, ibiyintoni leyo? Kwaye sithe ividiyo enomdla ibonisile apho oomalume abahamba ze kunye noomakazi babandakanyeka khona, khange siqonde ukuba yintoni ... Oko kukuthi, kwibanga lesi-2 sele ibonisiwe esikolweni.
Bathatha iifowuni kude nabantwana, abantwana abaninzi baneefowuni zokuthintela abantwana ukuba bangazifaki, ke bayayibona kwaye bababonise iphonografi. Kwaye abantwana bafike ekhaya bothukile, abakwazi nokuxela oko bakubonileyo. Uyayiqonda le nkqubo? Yonke into inje. Yonke into ifuna ukwaphulwa ngokupheleleyo ukuze umntu, umntu omncinci, abuye ekhaya, ukuba uxelela ekhaya ngento eyenzekileyo esikolweni okanye egadini, aze utitshala afumanise ngayo, uya kohlwaywa. Emva koko baya kohlwaya nyani esikolweni. Kufuneka axelele esikolweni ngelo xesha ..
Imixholo yemfundo yezesondo yabantwana iphakanyiswa ngoku eKazakhstan naseRussia, kodwa ngelixa singabazali, asazi ukuba le nto inokuba njani kuthi.
Ewe kunjalo, sibona kuphela ukusongelwa. Sibona isisongelo, kwaye uyazi ukuba kunjani ... Kukho iimeko xa abazali bebulala umntwana kwaye kwangoko kukho indawo enkulu yokulahla imithombo yeendaba kangangokuba abasemagunyeni abagcinayo abagqibanga ukubukela, abasemagunyeni abagcinayo bafuna amandla ngakumbi. Banamandla apheleleyo. Abahoyanga. Abathathi abantwana kwiintsapho ezinobundlobongela, apho utata angeza khona kwaye ukhulule nje intloko yamagosa okugcina. Abathathi kwiintsapho ezinjalo. Bathatha abantwana kwiintsapho apho kungasayi kubakho ngxaki nosapho.
Apho usapho luya enkundleni, abaluthathi abantwana kusapho lweembacu. Kuba baya kuza baphose iziqhushumbisi, kwaye bona ngokwabo baqonda yonke into. Abazichukumisi nezo ntsapho, abantwana, nokuba benza ntoni apho. Bayeke babulalane bodwa.
Ungasixelela ukuba ujongene nantoni?
Sasijongane nenyaniso yokuba esikolweni sethu kukho inkwenkwe yase-Afghanistan eyabetha abanye abantwana, yaqala yakhatywa, emva koko yakrwitshaza abantwana, yabatyhalela ezinyukweni, yabamba ifolokhwe entanyeni yenye.
Wazama ukunkqonkqoza unyana wethu ngepensile yamehlo ngexesha lesifundo, kwaye kwabakho ixesha apho isikolo samvalela lo mfana, oko kukuthi, impixano yasonjululwa okwethutyana, emva koko bamkhulula kwisohlwayo nakwimida, wahlasela unyana wethu. Ndizamile ukusombulula ingxaki ngolawulo lwesikolo, ukuze umntwana avalelwe ngokulula, ukuze bahlale kwiidesika ezahlukeneyo. Ukuthintela obu bundlobongela nokubethwa, kuba unyana wam wathi kum, "Tata, kutheni le nto sihlala kweli lizwe nje kwaye kutheni le nto sifudukele kweli lizwe?"
Ekugqibeleni, unyana wakhe akazange avume kwaphela ukuya kwisikolo saseJamani. Kwaye wandibonisa oku, esika intloko, esithi "Tata, uzakufa" kum ngesiJamani. Ndize kwinqununu yesikolo ndize ndixolise, ngaba oku kuqhelekile kuwe? Yeyiphi incwadi yesiJamani ezi zenzo zomzimba? Uthi kum: le ivela kuMickey Mouse. Oko kukuthi, lo mntwana wase-Afghanistan wayibona kuMickey Mouse, emva koko wayibonisa wonke umntu, wayibonisa nomfundisi-ntsapho wezemidlalo, emva koko kwaba semthethweni ukuba akukho mntu ubonayo nantoni na, akukho mntu waziyo nto, njl. njl.
Kwaye sihamba. Ndacinga ukuba kufuneka ndikhangele enye emva koko .. Kwaye umphathi wathi kuyinto eqhelekileyo ukubethana kwabantwana, le yinkqubo yokukhula. Apha. Ngokubanzi, ungaya naphi na apho ufuna khona ukusuka apha, ukuba awonelisekanga sisikolo sethu, yiya naphi na apho ufuna khona.
Ndaze ndanxibelelana nommeli waseRussia eBonn, sahlala eCologne, igqwetha labhalisa umntwana wam kwisikolo saseRussia kummeli, sasuka eCologne saya eBonn, amaJamani asithembisa ngexesha lokuhamba ukuba siya kuvuma kwesi sikolo ngaphandle kwengxaki, nasemva kokuhamba Oko kukuthi, yayingumgibe kubo, kwaye emva kohambo basala, basithintela ukuba siye kwesi sikolo saseRashiya.
Ukuba yena, ngokwembono yabo, akahlangabezani nemigangatho yemfundo yaseJamani. Ewe, ewe, abafundisi abantwana ukusika intamo, intloko, ukunkqonkqoza amehlo, kunye nokufaka ifolokhwe. Ke ngoko, ayihambelani nemigangatho yemfundo yaseJamani kunye nenyaniso yaseJamani yanamhlanje. Ukuhlala ezidolophini, ukudala imigulukudu, ukulwa, ukubaleka, ukukhaba, ukujija iimela, izinti, njl. Oko kukuthi, iimpendulo zam zithi isikolo saseJamani kufuneka sifundise ubunyani bobomi nabantwana kuluntu lwaseJamani. Ewe, bayafundisa kwaye kwavela umbuzo kwangoko malunga nale nto inye, kukho isikolo saseArabhu eBonn, exhaswa yiLibya, kwaye inesimo esifanayo nesesikolo saseRussia, oko kukuthi, nayo ayihlangabezani nemigangatho yemfundo yaseJamani.
Kodwa isiJamani, isiArabhu nesiRashiya abantwana bangaya apho, oko kukuthi, abantwana banokuya kwisikolo sama-Arabhu, kodwa abantwana abakwazi ukuya kwisikolo saseRashiya. Ndabona ubuNazi abathile kule nto. Ndabona ucalucalulo kule nto. Ndixelele ngobu buNazi, samangalela ukuvumela umntwana ukuba aye kweso sikolo saseRussia, inkundla yeejaji ezi-5 zaseJamani yasala. Isigqibo senkundla sithi kwisikolo sethu eCologne bekukho abantwana aba-3 abakrwitshiweyo, hayi ukusweleka, kodwa abakrwitshwe kakuhle. Kwaye abantwana bayakukhumbula konke oku ngokwendalo, bayakhumbula ngakumbi ukuba bekukho ukubethwa, bekukho ukubethwa unyaka kwaye umphathi engenzanga nto.
Kubhaliwe ngolu hlobo kwisigqibo senkundla. Kwaye kwisigqibo senkundla kubhaliwe ukuba andinalungelo lokuyithandabuza inkqubo yemfundo yaseJamani, Oko kukuthi, onke amatyala ebesesikolweni unyaka wonke ngamatyala awodwa, ukuba besikwisikolo esinye, besiseCologne kwaye emva koko safudukela Bonn, ingxaki ngezikolo zaseCologne ngoku isonjululwe ngokupheleleyo kuthi. Oko kukuthi, ngoku simkile ukuya kwesinye isixeko, iJamani igcwele izixeko, unokuhamba ngokubanzi usiya kwenye indawo uye kuyo yonke ixesha.
Indawo nganye entsha iya kuthi ingxaki isonjululwe. Kwaye eBonn, xa ndandithetha nabazali bam, xa sasibhalisa apho emva kokuhamba, kodwa ngaphambi kokuya esikolweni, yayiyiholide yehlobo, ndabuza abazali bam eBonn, kodwa luthini uluvo lwakho malunga nezikolo zaseBonn? Bathe, kwiminyaka emi-5 eyadlulayo, phambi kweembacu, phambi kwamaza eembacu, bekukho izikolo ezilungileyo nezingalunganga. Kwaye ngoku zonke izikolo zimbi, kuba zonke izikolo ngoku zinokubethwa, iingxaki, kwaye konke oku kusuka kwisikolo samabanga aphantsi, amabanga okuqala ama-4. Ukusuka kwibanga lesihlanu baya kwiziko lemithambo, kwizikolo eziqhelekileyo, nakwindawo yokwenza umthambo yayihlala ilungile, kodwa ngoku ayisiyonto imbi, kuba umthetho wezopolitiko uthi mabathathe ababaleki baye kwindawo yokwenza umthambo, ngaphandle kwamabanga, nokuba banolwazi luni, oko kukuthi, sele beza neziqhushumbisi , phaya sele bezisa iimela, kuyenzeka phaya, umsebenzi wandixelela ukuba unyana wakhe wayesitya kwigymnasium, amaArabhu eza kuye, athi, mamela, kwaye utya ntoni? SineRamadan, awunalungelo. Ke andinguye umSilamsi, kwaye baqala umlo. Oko kukuthi, uyaqonda, bamphuthuma, waqala waphendula, oko kukuthi, le yinkcubeko, xa abantwana bedlala ngamatye ngeentonga, emva koko bazisa egadini nasezikolweni, kwaye amaJamani akholelwa ukuba abanye abantwana kufuneka babathande aba bantwana. emva koko dibanisa, fundisa kwakhona ... Yintoni enokuthi iphinde ifundiswe ukudibanisa? Kutheni unyana wam esiza eklasini, kukho isinye kwisithathu sama-Arabhu, isithathu sabaseSyria, isithathu sama-Afghani, amaJamani amabini, omnye umntwana waseRussia. Loluphi uhlobo lwenkcubeko umntwana wam aya kuyizisa inkcubeko yaseJamani kwiklasi enjalo? Uzisa ekhaya apha (umqondiso unqamle intamo) kwaye uthi tata uzobe ufile. Wafunda oko wayekufunda esikolweni kwaye weza nako.
Lo ngumbuzo wendalo, ngaba kukho ukujiya kwemibala apha? Ngenxa yokuba kukho iimeko ezizimeleyo, kukho utyekelo, kwaye kukho ubunzima obukhulu.
Kodwa ukuze siqonde ukuba kukho ukujiya kwemibala, kufuneka sijonge kumaphephandaba aseJamani. Imithombo yeendaba yaseJamani ibiza imeko nganye ukuba iyodwa, kodwa umzekelo, apha besiseCologne, sinalo uxwebhu, igosa, kwisikolo sethu kukho abantwana abathathu abakrwitshiweyo. Sinalo olunye uxwebhu, oluvela kwisebe lezemfundo esixekweni, lokuba eCologne abantwana abangama-2 200 abagulayo abangahambelaniyo nesikolo esiqhelekileyo sikarhulumente bayanyanzelwa ukuba bafunde kwaye bafunde apho, kuba iindawo zikhethekileyo. Izikolo zabo azenzi. Oko kukuthi, aba bantwana babetha abanye abantwana ngexesha lesifundo, baphazamise iiklasi, kodwa akukho ndawo, ke siyanyamezelana. Kwaye uyabona, ama-2200 aqala unyaka nonyaka. Qho ngonyaka kuza abatsha, abatsha bahambe. Kwaye eCologne kukho malunga ne-100 yezikolo zaseprayimari. Sahlula-hlula abantwana abangama-2 200 kwizikolo ezili-100, sifumana malunga nama-22 abantwana kwisikolo ngasinye nakwimigangatho engama-8-10 kwisikolo ngasinye samabanga aphantsi. Sifumana ukuba kukho malunga nabantwana ababini abanjalo kwiklasi nganye. Oku kuluncedo olukhulu ezikolweni, kuba umntwana omnye okanye ababini eklasini banikwa umvuzo owongezelelweyo kutitshala, oko kukuthi, emva koko ujongane naba bantwana babini, bonke abanye basezindlebeni zabo.
Kuko konke. Olu luxwebhu. Kulungile, sithatha umzekelo weSikolo saseBerlin. Kukho iiklasi kwizikolo zaseBerlin apho kungekho namnye umfundi othetha igama elinye ngesiJamani. Eli likomkhulu kwaye ootitshala ngokwabo babhala ngale nto, banika iincwadi malunga nokuba yintoni ngoku intlekele eJamani, kuba babenayo ngaphambili, kulapho amaJamani amaKazakh afudukela kwiminyaka yee-90, umzekelo, iqela lamaJamani, amaJamani amaKazakh afudukela eJamani, bachithachitheka ezidolophini, besiya kwizikolo zasekuhlaleni kwaye bekukho malunga nama-25 kwabafundi abangama-30 kukho amaJamani. Kwakhona, esi sisiJamani saseJamani, isiJamani isi-Kazakh saseJamani, oko kukuthi, ezintlanu ngokuchasene nama-25 kwaye ngokulandelelana ama-25 afundisa ulwimi, inkcubeko yendawo, amasiko endawo. Ukuba amaJamani amaKazakh, ayengenampucuko, eJamani kukho imigaqo eyahlukileyo ongenakukwazi ukuyokundwendwela apho, kuya kufuneka uvumelane apho kwiinyanga ezi-3 kwangaphambili, kwiinyanga ezintandathu kwangaphambili, fowuna uvumelane.
EJamani, indlela abajonga ngayo abazali yahlukile. Bazali, inyani yokuba abazali bahlala kumakhaya abalupheleyo kwaye basweleka kuyinto eqhelekileyo eJamani.
Uthi eli binzana malunga nabantwana abathathu abakrwitshiweyo esikolweni lavakala linobuzaza kakhulu. Ndiyaqonda ukuba sithetha ngomlo ophakathi kwabantwana, hayi malunga nokuzama ukubulala?
Kwakungekho mlo, kwabakho uhlaselo oluthe ngqo oluvela e-Afghan, kuba wakhaba ekuqaleni xa esiya esikolweni. Khaba, umfundise okanye ufundiswe ngumntu. Yayingumbuzo emapoliseni ukuba ngubani, kodwa akukho namnye owaziyo. Wayefundiswe ukubamba intamo, ukubamba ngobungcali, ukubetha intamo, ngokuqinisekileyo ukubetha umphezulu wentloko, ukubetha entloko, emzimbeni ophezulu. Kwaye abantwana abathathu ... Oko kukuthi, wabakrwitsha, wakrwitshaza abantwana abathathu, wabakrwitsha ukuya kuthi ga kwinqanaba lokuba iiklasi ziyekwe. Kolu xwebhu ikhoyo, umlawuli ubhala athi, "Ndayeka iiklasi, lo mntwana wayevela, ngokungathi kunjalo, eklasini, ndafuna ukuba abazali beze bazomthumela ekhaya."
Inqununu yesikolo, abaphathi besikolo kufuneka babenoxanduva lokukhulisa abantwana nokhuseleko lwabantwana, ngeli xesha. Okwesibini, iJamani kufuneka ibe nomthetho osetyenziswayo, owayo umthetho wesizwe kunye neNgqungquthela ye-UN yamaLungelo oMntwana, iNgqungquthela ye-UN yamalungelo oluntu. IJamani kufuneka ithobele. Ngaba konke oku akubonwanga?
Lilia, into exakayo kukuba iNdibano yamaLungelo oMntwana ibandakanyiwe ngokubanzi kwimithetho yaseJamani. Ibiyinxalenye yomthetho waseJamani isithuba seminyaka engamashumi amathathu, oko kukuthi, impendulo yeKhomishini yaseYurophu, ibhaliwe, ndiyakrokra, ngolawulo lwengingqi apho ndihlala khona, kanye apho babhala khona isicatshulwa, basithumela kwiKhomishini yaseYurophu, iKhomishini yaseYurophu sayisayina sayithumela kum. Oko kukuthi, ukubala yayikukuba singathumela iphepha emntwini, iKhomishini yaseYurophu, igunya eliphezulu lalibhalwe ephepheni, wayezihlamba ngale mpendulo alibale, njengephupha elibi, yonke into eyenzekileyo.
Kwaye ngokubanzi, nayo yonke into, ngokungathi kunjalo, ayikhathali ngaye. Kungenxa yokuba ukuba sijonga imithetho, kwaye kuphela ngumthetho oseka i-European Union. Ukuba sijonga kwiNgqungquthela yamaLungelo oMntwana uqobo, ifakiwe kumthetho waseJamani ukusukela kwiminyaka yamashumi asithoba, iJamani iyizalisekisile, kunye neKhowudi yoLwaphulo-mthetho. Umgaqo woLwaphulo-mthetho ngokwendalo uyakwalela ukubetha abantwana hayi abantwana kuphela ngabantwana. UMgaqo woLwaphulo-mthetho ukwabeka uxanduva kwinqununu yesikolo, kubasebenzi besikolo ekuthinteleni ubundlobongela, ngokungathi kwindlu yopapasho eyenzelwayo, ukungcungcuthekiswa kwabantu abaphantsi, ukuba ukubethwa kunyaka ophelileyo, oku kukungcungcuthekiswa kwabantu abaphantsi.
Xa ndafaka isikhalazo esihambelanayo emapoliseni ngokuchasene nomlawuli ngehlobo ephelileyo, ipolisa lathi kwangoko kum "mfana, kungcono uhambe apha, hamba apha. Faka nje isicelo esinye ngoku, yonke into izakulunga emaphepheni akhe, kodwa uza kuvalelwa, uza kohlwaywa. " Ewe, iinyanga ezi-4 zophando, amaxwebhu okuba abantwana bakrwitshwe esikolweni, amaxwebhu athi umlawuli uphume womile. Iofisi yomtshutshisi yalivala ityala kuye, nanjengoko umlawuli wayebukele unyaka wonke kwaye wayenethemba lokuba yonke into izakusonjululwa yodwa, kwaye bandivulela ityala, bethuka umlawuli ukuba ndimonile ngale nto, ndikrokrela ukuba akalunganga. Kwaye kunye nesiqalekiso sobuxoki. Oko kukuthi, kuba akazange ohlwaywe ...
Ngaba ndiqonda ngokuchanekileyo ukuba bekukho umbuzo malunga nokususa unyana wakho oneminyaka emithandathu kusapho?
Xa sinayo. Sifumene ukuvalwa kokuya kwisikolo saseRashiya phantsi koMphathiswa Wezangaphandle eRashiya, kwaye umntwana wakwala kwaphela ukuya kwizikolo zaseJamani, kuba asifundanga kwanto apho, kodwa silwa kuphela apho. EJamani, kukho isigqibo senkundla, kwiminyaka elishumi eyadlulayo, esichaza ukuba senze ntoni nabazali njengathi. Kuhlawulwa amatyala phaya, kuqala kubhalwa izohlwayo, emva koko umntwana asuswe kusapho. Zonke. Apho, ukuba umntwana akahambi sikolo, amaJamani acinga ngesikolo saseJamani, sijonga ukuba isikolo sisikolo, emva koko umntwana urhoxisiwe. Sigqibe ekubeni singazibeki emngciphekweni kwaye singalindi lo mzuzu, xa ucango lukhatywa ebusuku. Ngenxa yokuba besisazi amatyala amaninzi, sibonile kwaye siva lukhulu, kanye nge-6, nge-5 ekuseni amapolisa angama-20 akhaba emnyango emva koko kwavulwa ityala ngokuchasene nawe. Kwaye konke oko. Mna nomfazi wam sahamba nabantwana.
UNikolay, usixelele nje ukuba singayenzi njani. Uthethe ngokungalingani ekuphunyezweni kwengcamango echanekileyo yokukhusela abantwana. Okwangoku, ubusitsho ukuba kukho iimeko apho umntwana kufuneka ahlangulwe kubazali bakhe, ngaba amapolisa abantwana asafuneka?
Ndiyakholelwa ukuba ... Uyabona, ukuba iintsapho ezikhulisa abantwana zathatha abantwana simahla, oko kukuthi, ngaphandle kwenkxaso-mali karhulumente, uyazi, kukho abantu abanentliziyo yoku. Ukuba amathuba anokuvumela, kuya kubakho ilizwe apho kungekho makhaya aziinkedama kwaphela. Ngokwamazwi omntwana wonke, ayisiyofa ipropathi, kodwa kubantwana bonke kubhaliwe, uluhlu oluchanekileyo luyenziwa, ukuba kukho into eyenzekileyo kubazali, lowo uza kuba naye umntwana. Ukuba kukho into eyenzekayo kulo mntu, umntwana uza kuba nabani. Oko kukuthi, ulawulo olunjalo. Kuyavela ukuba xa kukho ingxaki, lo mntwana akufuneki abe sisihloko seshishini.
E-Finland, umzekelo, abantwana, nokuba batshintshelwe kusapho olukhulisa abantwana ngokwam, ngokokwazi kwam, abazali abahluthwa amalungelo obuzali.
Ewe, kodwa usapho luyatshatyalaliswa ngokwasezimalini, kwaye usapho alunakulwela umntwana. Ukuba usapho lufumana amatyala ayi-100 lamawaka ee-euro ngomntwana ngamnye ngonyaka, kwaye ngokuzenzekelayo abalekele ngaphandle kokungabinamali, usapho alunakulwela umntwana wabo konke konke. Ndiyathetha le nto. EJamani, kwiinyanga nje ezimbalwa ezidlulileyo, kwabakho ityala lasendle xa kubethwa usana, kwabethwa umntwana, kwaye phambi koko kangangeenyanga ezimbini okanye ezintathu yonke indlu ekwenzelwa kuyo oku kubethwa isakhiwo esinemigangatho emininzi, ewe, kukho imigangatho emihlanu. Abamelwane kuyo yonke indlu baphindaphinde ukubiza amapolisa, baguqukela kubulungisa bolutsha, baguqukela kumagunya okugcina ... Abazange benze nto. Kwaye kwavela umbuzo wokuba kutheni ungakhange wenze nto ngale meko, kwaye kutheni iimeko xa, ewe, kwimeko yethu, nomntwana owalayo ukuya esikolweni ngenxa yokubethwa, kutheni uhlasela usapho olunje, kwaye ezo ntsapho ziyahlaselwa.
Ngaba ungaphendula umbuzo wokugqibela? Ngaba uyabufuna ubulungisa bolutsha?
Ewe, ingekho ngohlobo lwaseJamani, kwaye ingekho kwifom eza kumiliselwa kwilizwe lakho. Nanku uLily, umzuzu omnye, umzuzu omnye omncinci, kodwa kubaluleke kakhulu. Ngoku, ukuba umntwana wakho uthathiwe usapho lwakho, usapho lunokuya enkundleni, lufake isimangalo ngokuchasene nezenzo zokuba liliso kwaye lumangalele, kodwa lumangalele enkundleni. Ijaji iya kujonga amaxwebhu, nanga amaxwebhu, nazi iimpawu, nantsi abazali, izakujongana noku. Ukuba unomgaqo weeyure ezingama-24, kuya kubonakala ngathi. Wathathwa umntwana, amaxwebhu anikezelwa kwinkundla, ukugcinwa kwanikezelwa kwinkundla. Kwinkundla, kuya kubakho ipakethi enjalo kwangoko, ijaji eleleyo iza, kufuneka ayifunde kwaye ayithathele ingqalelo yonke le nto kwiyure ezingama-24. Uyakutyikitya konke oku, ukusuka phezulu kuye ezantsi, ipakethe yonke, onke amatyala, kwaye emva koko uya kuzicel'umngeni isenzo sale jaji kwinkundla ephezulu.
Kodwa isigqibo sakhe. Uyayazi indlela esebenza ngayo le nkqubo. Kulo naliphi na ilizwe, inkqubo isebenza ngendlela yokuba inkundla ephezulu inqabile ukuguqula okanye ukutshintsha isigqibo senkundla. Oku akuxhomekekanga kwilizwe. Ngokukhawuleza, ikhonkco elalilawula ukugcinwa liyanyamalala, alisekho. Kwaye yintoni enye eyenziweyo eJamani. EJamani, inkundla ithatha isigqibo esisekwe kumbono wengcali, ingcali ibhala ukuba ingamthathi na okanye ingamthathi umntwana, kwaye inkundla ihlawula ingcali ngamawaka angama-20 eeros ngale nto. Kodwa ingcali ifumana iodolo ngqo kwiJugendamt, ke ingcali ibhala into efunwa yiJugendamt. Ukuba ingcali ayibhali le nto ifunwa nguJugendamt, ke le nto ifuna ukugcinwa, ingcali ayizukufumana ezinye iiodolo kule Jugendamt. Kuyavela ukuba kubonakala ngathi iimeko ezizimeleyo yingcali, iJugendamt, ijaji, kodwa bonke basebenza ngetyathanga kwaye bonke bayasebenza, kunye nekhaya labantwana. Kodwa bonke basebenza kule nto inye, iqela elinye, behlamba izandla.
Ingcali ibhala njengoko iJugendamt ifuna, ijaji ithi, kodwa andiyongcali, apha ndinoluvo lwengcali, yamkela ingcali, abazali baqesha ingcali yabo, bahlawule amawaka angama-20 eeuros ngokwabo, kwaye ijaji ithi andiyithembi ingcali yakho. Ke uza kuthini ukuba uqinisekisiwe. Kwaye andimthembi. Kwaye ukusebenza kweempawu zakho, ubungqina bamangqina, abamelwane, abadlala ndawo kwaphela.
Ndifikile. Uyabona, abantu bayabaleka eJamani nabantwana baya eFrance, baya eMelika, becela indawo yokubalekela eMelika. Abantu bayabaleka bewela, kwaye nje ukuba umntwana wakho abambe egadini okanye esikolweni ukuba umama notata bagqibe kwelokuba baye eFrance, kwaye usapho ngamaJamani, iJugendamt igqiba kwelokuba irhoxe kubazali ilungelo lokumisela indawo yokuhlala komntwana. Ungaya ngokwakho, wedwa, kwaye umntwana wakho uya kuhlala eJamani, umntwana waseJamani uyinto, ngurhulumente. Nantsi ingxaki, Lilia. Oko kukuthi, abantu ababaleki ngoko nangoko, banoluhlobo oluthile lokungqubana, iqala ukukhula, kwaye xa bethatha isigqibo sokubaleka, baqala ukupakisha izinto, umntwana uyayibona kwaye uthi, kodwa senza ntoni? Kwaye siya eFrance. Ilizwe laseYurophu, ayisiyiAfrika le, akunjalo? Kubonakala ngathi batya abantu nabantwana phaya, bafuduka eJamani baya kumda-eFrance sele. Hayi, awuyi kuhamba. Ungazishiya, kwaye nceda ushiye abantwana apha.
Kwaye ke uyakufumana amatyala apho, kwaye ukuba uyahamba nomntwana, kwaye uJugendamt uthathe isigqibo sokuba ilungelo lakho lokumisela indawo yokuhlala yomntwana irhoxisiwe, amapolisa aseJamani aya kuza kuwe, hayi amaFrentshi. IsiJamani. Unkqonkqoza emnyango wakho, ubhalisa umntwana eFrance, kwaye kwangoko ulwazi luya eJamani, apho akhoyo umntwana wakho. Amapolisa aseJamani aza kuza kuwe, uya kubiza amapolisa aseFrance, umntwana wam uyathathwa, amapolisa aseFrance akazukuza ukukhusela.
Umntwana wakho uyakuthathwa ngamapolisa aseJamani asiwe eJamani. Kwaye kukho iimeko ezinjalo, kwaye zininzi iimeko ezinjalo. Ke ngoko, xa kwamkelwa imithetho, kuya kufuneka ukuba ujonge ngononophelo, hayi okusongelwa ilekese, ukuba unjani lo mthetho, kodwa yintoni eza kwenzeka emva koko. Kwaye ubunyani ulapha.
Ngaba wena okanye wakwazi ukushiya iJamani nosapho lwakho? Ngaba ngoku uhlala eMoscow?
Lily, ndifuna ukuthetha oku. Abantu bathi bayandityhola kwi-Intanethi, kuyenzeka ukuba u-Ernay agqibe apho, enze yonke into elusizi. Abantu baseMelika babhala izikhalazo kwi-US Congress, gcina abantwana bethu baseMelika kumaJamani. AmaFrentshi abhala izikhalazo kwiPalamente yaseYurophu, kwaye kukho, sele kukho inkqubo ngalo mbandela, gcina abantwana bethu baseFrance kumaJamani. AmaTaliyane abhala izicelo zokuhlangula abantwana bethu base-Italiya kumaJamani. Kwaye ndingatsho ngokuqinisekileyo ukuba sonwabile kakhulu ukuba sikwazile ukubakhupha ngoluhlobo abantwana, ngaphambi kokuba sibabethe. Ukuba khange sibakhuphe ngo-Agasti ophelileyo, emva koko, nangexesha lenkqubo yenkundla ngo-Okthobha-Novemba, ngesele siphume emnyango ngentsimbi yesi-5 ebusuku kwaye malunga namapolisa angama-25 avele angena, athathe abantwana ahambe, babhala kwangoko ityala lolwaphulo-mthetho ubethe amapolisa angama-25, akhona amatyala anjalo. La mapolisa mabhulu abhala ingxelo phaya, wokuba ubabethe bonke, ukuze uphile ngcono emva koko, andisayi kuphinda ndibabone abantwana bam kunye nenkosikazi yam abantwana bethu ebomini. Oko kukuthi, banokutshintsha nje amagama abo, batshintshe iifani zabo, batshintshe iidilesi zabo, asisayi kuphinda ndibabone. Silumkisiwe nje ukuba kuya kuba njalo. Abantu abanamava. Ke ngoku onke amagqwetha amaJamani endithetha nawo, into yokuqala abayithethayo yile, ubakhuphile abantwana? Ndithi ewe, zilungile kum. Le yeyona nto ichanekileyo oyenzileyo kule meko.